Sawirro: Mas'uuliyiin kormeeray sida uu Muqdisha uga dhaqan galay Bandowga - Jowhar Somali news Leader
Home News Sawirro: Mas’uuliyiin kormeeray sida uu Muqdisha uga dhaqan galay Bandowga
Sawirro: Mas’uuliyiin kormeeray sida uu Muqdisha uga dhaqan galay Bandowga
Waxaa caawa si rasmi ah uga dhaqan galay magaalada Muqdisho bandow habeenkii ah oo dowladda Soomaaliya ku soo rogtay, si looga hortago cudurka Coronavirus.
Xilliga Bandowga bilaabanayay oo aheyd 8:00 Fiidnimo ayuu si tartiib tartiib u bilowday inay dadka u hoggaansamaan, waxaana hakaday dhaqaaqii gaadiidka iyo dadka, sidoo kale goobaha ganacsiga ayaa la xiray, marka laga reebo goobaha lagu iibiyo raashinka qutul daruuriga iyo farmashiyeyaasha.
Maamulka Gobolka Banaadir iyo Taliska Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ayaa caawa kormeer ku sameeyay 17ka Degmo ee Gobolka Banaadir kormeerkaan oo ahaa mid ay ugu kuur galayeen sida uu u hir galay bandowga lagu soo rogay Magaalada Muqdisho.
Gudoomiye kuxigeenka Aminiga iyo Siyaasadda Maamulka Gobolka Banaadir Maxamed Cabdullaahi (Tuulax) oo saxafada la hadlay ayaa ka codsaday Shacabka kunool Magaalada Muqdisho in ay ilaaliyaan nimaadka Dowladnimada.
Sidoo kale Taliyaha Booliska Jen. Cabdi Xasan Xijaar ayaa sheegay in Bandowga uusan saameyn doonin wariyeyaasha, si ay shaqadooda u gutaan, sidoo kale ciidamada ayuu ugu baaqay inay u fududeeyaan dadka baahiyaha gaarka qaba ama dadka xanuunsan, inta Bandowga socdo.